Tongasoa eto an-toerana ny Nomads Digital momba ny fijanonana maharitra miaraka amin'ny fahazoan-dàlana hipetrahana vaovao
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Malta » Tongasoa eto an-toerana ny Nomads Digital momba ny fijanonana maharitra miaraka amin'ny fahazoan-dàlana hipetrahana vaovao
Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Hospitality Industry • Vaovao Mafana Malta • Vaovao • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia
Sary natolotry ny MTA / Residence Malta
Malta, vondronosy iray any amin'ny Ranomasina Mediterane, izao dia mandray ireo mpifindrafindra nomerika avy amin'ny firenena tsy eropeana miaraka amin'ny Fahazoandàlana Nomad Residence vaovao natomboka hanomezana ny teratany firenena fahatelo, anisan'izany ny avy any Etazonia sy Kanada, ny fotoana hiasana lavitra avy any Malta mandritra ny fotoana fohy. . Ity hetsika ity dia hisokatra ho an'ireo mpangataka vaksiny COVID-19 ihany.
Ity fahazoan-dàlana vaovao ity dia natao hanatrarana sokajy vaovao any ankoatr'i Eropa, satria mitombo hatrany ny fivezivezena manerantany ary mahazo laza.
Ny olona afaka miasa lavitra amin'ny alàlan'ny teknolojia sy ny mpandraharaha manana fahalalahana amin'ny dia sy fizahana firenena sy kolontsaina vaovao dia raisina an-tanan-droa.
Betsaka ny olona manana asa ara-dalàna izay miasa ao an-trano no mitady fomba hanambarana ity fomba fiasa vaovao ity amin'ny dia lavitra sy lavitra.
Malta dia efa manana vondrom-piarahamonina mpifindrafindra nomerika manan-danja, ankamaroan'ny olom-pirenena UE izay tsy mila fahazoan-dàlana noho ny fahalalahana mihetsika. Ny fahazoan-dàlana vaovao dia natao hahatratra ny toeram-pianarana vaovao any ankoatr'i Eropa, satria ny fivezivezena manerantany dia mitombo hatrany ary mahazo laza, aorian'ny COVID.
"Nitsambikina tamin'ny fisondrotan'ny fitakiana fitadiavana asa lavitra manerantany i Malta, satria napetraka ny tsangantsangana sy ny fironana vaovao," hoy i Charles Mizzi, Lehiben'ny Executive Executive ao amin'ny Resident Malta, ny masoivohon'ny governemanta mitantana fahazoan-dàlana.
"Ny olona afaka miasa lavitra amin'ny alàlan'ny teknolojia sy ny mpandraharaha manana ny lazany hitety firenena sy kolontsaina vaovao dia arahabaina," hoy hatrany Andriamatoa Mizzi. “Raha misy lesona ianarana avy amin'ny areti-mandringana dia ny fahavononan'ny olona hifindra mihoatra ny taloha. Malta dia firenena manana tolotra betsaka - manomboka amin'ny toetrandro mahafinaritra sy ny nosy mediteraneanina, ka hatramin'ny manan-tantara sy ny lova, ny olona mandray olona, ​​ny fotodrafitrasa malalaka ary ny fidirana amin'ny serivisy fitsaboana ara-pahasalamana manerantany. Eny tokoa, hahatsapa ho maivamaivana ny mpifindrafindra monina amin'ny minitra fipetrahany eto. Ary amin'ny fiteny anglisy ho fiteny ofisialy sy fiteny fanaovana raharaham-barotra, dia ho mora ny miresaka amin'ny olona ao an-toerana. ”
Ireo maniry hiasa avy any Malta, mandritra ny fotoana maharitra maharitra iray taona (havaozina), dia tsy maintsy vaksiny, manaporofo fa afaka miasa lavitra izy ireo, tsy miankina amin'ny toerana misy azy. Tokony hiasa amin'ny mpampiasa voasoratra anarana ivelan'ny Malta izy ireo, mitarika asa aman-draharaha ho an'ny orinasa voasoratra ivelan'ny Malta, ary mpiara-miombon'antoka na tompon-trosa amin'izy ireo; na manolotra serivisy mahaleo tena na consulting ho an'ny mpanjifa manana orinasa maharitra any amin'ny firenena vahiny. Mandeha mahitsy ny fizotrany ary mampanantena serivisy mahomby izay andrasan'ny mpifindra monina mahay ny Residence Malta.
"Mandehandeha ny vahoaka ary manararaotra an'io fironana manerantany io i Malta," hoy i Johann Buttigieg, Lehiben'ny Executive Executive ao amin'ny Malta Tourism Authority. “Tsy mpivarotra eo amin'ny tsenan'ny fizahan-tany intsony ireo mpifindrafindra nomerika. Mihamaro ny olona manana asa ara-dalàna izay miasa avy any an-trano aorian'ny COVID dia mijery ny fomba fampifangaroana ity fomba fiasa vaovao ity amin'ny dia lavitra sy lavitra sy ny fahitana kolontsaina hafa. Mino izahay fa ity fiovan'ny paradigma mankany amin'ny asa lavitra ity dia mijanona eto, noho izany tsy misy fotoana tsara kokoa noho ny ankehitriny hisarihana ireo mpandraharaha maniry ny hifindra monina vetivety ary koa ireo vultures kolontsaina mpifindrafindra nomerika handeha manerana an'izao tontolo izao. Malta dia toerana mety indrindra, cosmopolitan miteny anglisy, nosy Mediteraneana. Ny hany fitaovana ilaina dia ny solosaina finday tsara hifandraisana amin'ireo fotodrafitr'asa lehibe manerantany manerana ny firenena. ”
Porofon'ny vaksiny: ny Amerikanina sy ny kanadiana dia tsy maintsy mampiasa ny fampiharana Verifly
VeriFLY dia novolavolain'ny mpamatsy vahaolana momba ny fanamarinana sy biometrika, Daon. VeriFLY dia manolotra mpandeha fomba azo antoka sy tsotra hanamafisana ny fepetra takian'ny COVID-19 any amin'ny toerana halehany. Rehefa avy namorona piraofilina azo antoka ao amin'ny rindrambaiko VeriFLY dia nanamarina i Daon fa mifanaraka amin'ny takian'ny firenena ny angon-drakitra mpanjifa ary mampiseho hafatra tsotra na tsy mahomby. Ity hafatra tsotra ity dia mandrindra ny fizotry ny fanamarinana sy ny fanamarinana antontan-taratasy alohan'ny hiaingany. Manome fampahatsiahivana ho an'ny mpandeha ihany koa ilay rindranasa rehefa manakaiky ny varavarankelin'ny fivezivezin'izy ireo na rehefa tapitra ny daty maha-izy azy ireo. Mianara bebe kokoa amin'ny fitsidihana dayon.com/verify.
Fampahalalana bebe kokoa momba ny fahazoan-dàlana momba ny fonenan'i Nomad any Malta résidencemalta.gov.mt/overview.
Ny nosy main-tanin'i Malta, eo afovoan'ny Ranomasina Mediterane, dia fonenan'ny lova mivaingana voaorina, ao anatin'izany ny hakitroka avo indrindra amin'ny UNESCO World Heritage Site amin'ny firenena firenena na aiza na aiza. Valletta, namboarin'ny Knights of St. John, mpiavonavona, dia iray amin'ny tranokalan'ny UNESCO sy ny renivohitry ny kolontsaina eropeana ho an'ny taona 2018. Ny fiarovana an'i Malta amin'ny vato dia miainga amin'ny maritrano vato tranainy indrindra eran'izao tontolo izao, ka hatrany amin'ny iray amin'ireo fanjakana anglisy rafitra fiarovan-tena mahatahotra indrindra, ary ahitàna fangaro marobe amin'ny maritrano anatiny, ara-pivavahana ary ara-tafika hatramin'ny vanim-potoana taloha, medieval ary tamin'ny andro maoderina. Miaraka amin'ny toetrandro mamirapiratra izaitsizy, morontsiraka manintona, fiainana andalam-piainana miroborobo ary tantara 7,000 taona manitikitika, dia misy zavatra maro azo jerena sy atao. jci-malaysia.com